पुरातन समयका भएकोले बाख्रा गरेको दूध यसको लाभदायी गुण लागि ज्ञात छ। आकाश, गर्जन र बिजुली Zeus परमेश्वर ईश्वरीय बाख्रा Amaltei को दूध मा खुवाइन्छ - ग्रीक मिथक सबै देवताहरूको राजा भन्छन्। आफ्नो ग्रंथ मा फारसका सबैभन्दा ठूलो चिकित्सक Avicenna लाभ रोक्न थियो जो बाख्रा गरेको दूध, उल्लेख senility। यसको प्लीहा पुरातन रोमी रोगहरु को उपचार को लागि प्रयोग भएको थियो। एक Gippokrat phthisis यो चमत्कारी पेय संग उपचार।
डाक्टर प्राचीन उपचार झाडापखाला उसिनेर बाख्रा दूध, जो समुद्र पत्थर र जौ grits थपिएको थियो गर्न। र पनि लागि तिल छलफल राम्रो preventative उपाय संग दूध उसिनेर आँखा cataracts। एक उच्चारण चिकित्सकीय प्रभाव संग धेरै धन जस्तै, यो उत्पादन सतावट र इन्कार गर्न subjected गरिएको छ। एक पटक बाख्रा गरेको दूध खान राम्रो, निषेध र हानि यसलाई छानबीन गरिएको छैन, र त्यसपछि अव्यावहारिक दूध विषाक्त घोषणा भएको थियो। तर, भाग्यवस, यो अवधि लामो पछिल्लो थिएन।
यो शिशुहरू गर्न चाहे बाख्रा गरेको दूध गर्न उपयोगी छ?
kontse19 शताब्दीमा चिकित्सकहरु मा साँच्चै बाख्रा गरेको दूध मूल्यांकन भएको थियो। यो उत्पादन प्रयोग वैज्ञानिक विधि द्वारा सिद्ध भएको छ, र चिकित्सा खुल्लमखुल्ला गाई गर्न बाख्रा दूध को लाभ, र आमाको दूध बारे यसो भएको छ। यो सक्रिय ड्राई लागू गरिएको थियो जो शिशु सूत्रहरूको उत्पादन, आधार थियो गाई गरेको दूध।
दूध पोषण मूल्य कारण उच्च प्रोटिन सामग्री बाख्रा, प्रोटिन-मुक्त नाइट्रोजन piakrina, thiamine (भिटामिन बी)। संसारभरि आधुनिक pediatricians निर्धक्क बच्चा खाना बस बाख्रा गरेको दूध आवश्यक घोषणा गर्दछु। पखाला - फाइदाको यो उत्पादन सानो मान्छे को शरीर मा एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा सक्षम छैन भन्ने छ, यो पचाउन सजिलो छ र अपच को manifestations प्रकुपित छैन।
आजकल, अक्सर बच्चाहरु grudnichkovogo उमेर बोतल-खुवाइन्छ। Pediatricians कडा नयाँ आमा बोकाको गरेको दूध कारण ध्यान र गाई को यो सट्टा प्रयोग गर्न सुझाव। डाक्टर यो बच्चाहरु को लागि एक अद्वितीय फेला विचार गर्नुहोस्।
परम्परागत चिकित्सा र बाख्रा गरेको दूध
धेरै शताब्दीयौंदेखि, बाख्रा गरेको दूध परम्परागत चिकित्सा मा एक उपाय रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले जाँगरको पुनर्स्थापना र पुरानो रोग प्रतिरोध गर्न शरीर क्षमता अभिवृद्धि गर्न लामो समय र गम्भीर बिरामी मान्छे, लागि खुवाउनुभयो थिए।
एलर्जी diathesis, पुराना भनिन्छ scrofula मा, चिकित्सकहरु बाख्राको को दूध संग उपचार जो। अनुभव को एक शताब्दीमा यो मात्र एलर्जी प्रतिक्रिया कारण छैन भनेर देखाउँछ, तर पनि यो रोग बाट निको बढवा दिन्छ। साथै, बाख्रा दूध व्यवहार रक्तअल्पता, को जठरांत्रिय पर्चा विभिन्न रोगहरु, दृष्टि को हानि।
लामो समय प्रयोग बाख्रा गरेको दूध लागि स्विस चिकित्सा मानिसहरू। रक्तअल्पता, rickets र क्षयरोग (टीबी) को उपचार मा उपयोगिता र प्रभावकारिता लामो प्रतीक्षा बाध्य छैनन्। र यो प्रसिद्ध कि टिप्पण लायक छ स्विस पनीरों गाई गरेको एक मिश्रण र तिनीहरूलाई एक अद्वितीय स्वाद दिन्छ र पनीर बनाउने व्यापार मा धेरै ख्याति ल्याए जो बाख्रा गरेको दूध, बनाइएका छन्।
बाख्रा गरेको दूध र चिकित्सा
पहिलो बाख्रा दूध दही Bulgarians को निर्माण मा प्रयोग गरिएको छ। यो दही देखि प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर Mechnikov dysbiosis को उपचार को लागि प्रयोग आधुनिक चिकित्सा जो प्रसिद्ध lactobacilli, विनियोजन भनेर थाह उपयोगी छ।
वैज्ञानिक प्रमाण svezhevydoennoe बाख्राको दूध उच्च bactericidal गुण छ भनेर देखाउँछ। बाख्राको दूध किन कोठा तापमान मा एक लामो समय को लागि भण्डारण र अमिलो गर्छ छ भन्ने छ।
बाख्रा गरेको दूध पोटासियम, कोबाल्ट, र बी भिटामिन को हृदय र स्नायु प्रणाली hematopoiesis संलग्न छन् को सामान्य कामकाज सुनिश्चित मा धनी छ।
बाख्रा गरेको दूध - क्यानाडा को चिकित्सकहरु सबैभन्दा स्वादिष्ट चिकित्सा छलफल। gallstone रोग, मिर्गी, fibroids, छाला र जोइन्टहरूमा को रोगहरु को उपचार मा सिद्ध को प्रयोग।
Pilaf - क्यालोरी संरचना, प्रयोग
सही आहार: घरमा शक्ति स्ट्रोक पछि
सुँगुर अघि मोती टस छैन: मूल्य phraseologism
सिंगापुर मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
अङ्गुर: घर मा बीउ देखि बढ्दै, विशेष गरी हेरविचार
प्रविधि बिछाउने shingles
नेल्सन रकफेलर: जीवनी
पुरानो toxoplasmosis लक्षण। Toxoplasmosis: उपचार
जूलिया Andreeva: जीवनी र काम
के ले र जन्म एक स्वस्थ बच्चा गर्न 35 पछि दिन के गर्ने? जन्म कसरी दिन र एक स्वस्थ बच्चा हुर्काउन: Komorowski